Global Voices teny Malagasy » Galindo : Namoha ny avelon’ny ‘ady maloto’ tao Espaina ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Marsa 2021 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Koldo Casla Nandika nirinandrea
Sokajy: Espaina, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Ny Tetezana - The Bridge
Enrique Rodríguez Galindo. nalaina tamin'ilay lahatsary an'ny fantsona TV LaSexta tao amin'ny YouTube 
Ny 13 Febroary 2021, nodimandry, lavon'ny COVID-19, teo amin'ny faha 82 taonany i Enrique Rodríguez Galindo.
Nitarika ny toby Intxaurrondo tao amin'ny tanàna Basque, Donostia-San Sebastián ny taona 1980 sy 1990 ilay jeneraly teo aloha avy ao amin'ny herin'ny zandarimaria Espaniola, Guardia Civil , Rodríguez Galindo. Tamin'izany fotoana izany, matetika ny polisy no kendren'ny ETA , vondrona mitam-piadiana miaro ny fahaleovantena Basque izay nitaky vola sy nandrahona olona an'arivony, namono olona miisa 850 tao anatin'ny antsasaky ny taonjato iray mandra-pahatongan'ny 2011, fotoana nanerena azy hampitsahatra ny herisetra nataony. Ny tsy fahampian'ny fanohanan'ny vahoaka sy tsy fahampian'ny hetsika mahomby nataon'ny polisy no antony lehibe nitrika ho amin'ny fahafatesan'ny ETA.
I Rodríguez Galindo no niandraikitra ny hetsika fanoherana ny fampihorohoroana tanaty toe-javatra tena sarotra. Na izany aza, mpaka ankeriny sy mpamono olona ihany koa izy.
Ity no navoakan'ny  Fitsarana Avo tao Espaina ny taona 2000, ary nanamafy izany ny Fitsarana Tampony. Voaheloka higadra 75 taona  i Rodríguez Galindo noho ny baiko nomeny hakana an-keriny sy hamonoana an'i José Antonio Lasa sy i José Ignacio Zabala. Ny taona 1983, nampijalijaliana izy ireo ary novonoin'ny vondrona mpamono fantatra amin'ny hoe GAL “Antiterrorist Liberation Groups.” Nalevina niaraka tamina sokay izy ireo tamin'ny fanantenana  diso fa ho levona ara-tsimika ny razana ka dia hanjavona tanteraka. Hita anefa ny vatana mangatsiakan'izy ireo ny taona 1985, ary tamin'ny 1995 vao afaka namantatra azy ireo ny mpitsabo.
Tamin'ireo 75 taona, ny dimy  taona monja no nolanian'i Rodríguez Galindo tany am-ponja. Nahazo fahafahana vonjimaika izy ny taona 2005 ary fahafahana narahina fepetra ny taona 2013.
Ny 2021, namoha ny avelon'ny lasan'i Espaina indray ny fahafatesan'i Rodríguez Galindo.
Vatsian'ny governemanta Espaniola ara-bola miafina ny GAL , ary tompon'andraikitra tamin'ny famonoana olona tsy latsaky ny 27 teo anelanelan'ny taona 1983 sy 1987 tamin'ilay antsoina hoe “ady maloto” . Voalaza ary fa mpikambana tao amin'ny ETA ihany ny sasany tamin'ireo niharam-boina, toa an'i Lasa sy Zabala, ny sasany kosa olona sendra nandalo tamin'ny toerana sy fotoana ratsy. Ny taona 1998, nigadra noho ny andraikitr'izy ireo tao amin'ny GAL ny sekreteran'ny atitany tao Espana, José Barrionuevo sy ny lefiny Rafael Vera ; i Felipe González, Praiminisitra tamin'izany fotoana izany no azo sary namihina azy ireo ho fanaovam-beloma  teo am-bavahadin'ny fonja. Nandritry ny resadresaka nifanaovana taminy ny taona 2010, no nanambara  tamin'ny fomba saro-takarina i González fa : “Tsy maintsy nanapa-kevitra aho raha toa ka tsy maintsy ho apoaka ireo mpitarika ny ETA, na tsia. Hoy aho hoe tsia. Ary tsy fantatro raha nanao hadisoana aho. ” Betsaka no nihevitra fa nisy fandraisan'anjaran'i González tamin'ny GAL, saingy hatreto aloha, tsy mbola nisy porofo mazava azo.
Araky ny notsindrin ‘ilay manampahaizana, Omar Encarnación, ny GAL dia “fitohizana fa tsy ny teboka fiaingan'ireo tetikadiam-panjakana hiadiana amin'ny fampihorohoroana” taorian'ny jadon'i Franco, izay nifarana ny taona 1975. GAL no vokatry ny tetezamita tsy nanjary nankany amin'ny demokrasia, izay nahitàna andrimpanjakana tsy voadio, niteraka ny tsy fahampian'ny fanarahamaso ara-demokratika an'ireo polisy, ny miaramila Guardia Civil, ary ny sampam-pitsikilovan'ny tafika. Ny fisian'ny GAL ihany koa no nandrisika ny ETA tamin'ny fanomezana azy ireo bala nahafany niady hevitra momba ny endrika demokratikan'i Espaina, ary nahafahan'izy ireo nijoro ho toy ny niharam-boina tamin'ny famoretana notohanan'ny fanjakana.
Ny sasany tamin'ireo fanehoankevitra momba ny fahafatesan'i Rodríguez Galindo no porofo fa mbola be dia be ny asa miandry ny fiarahamonina espaniôla hiatrehany ireo demony ao amin-dry zareo.
Tao amin'ny diary fahatsiarovana azy, ilay gazety be mpividy indrindra El País no niresaka  “ireo firaketana an-tsoratra momba ny asa soa” nataon'ilay jeneraly, voapentina fotsiny tamin'ny “alok” ilay “heverina ho fandraisany anjara tamin'ilay antsoina hoe ady maloto.” Maro ireo milaza fa tsy ilaina intsony ilay teny hoe “heverina” raha jerena ny sazy navoakan'ny fitsarana ho an'ny Galindo.
Macarena Olona, mpikambana ao amin'ny parlemanta avy amin'ny Vox, elatra farany havanana, ilay antoko fahatelo lehibe indrindra ao Espaina no nanoratra tao amin'ny Twitter : “Enga anie mba ho maivana aminao ny hipetrahan'ny tany, ry Jeneraly.”
Enga anie mba ho maivana aminao ny hipetrahan'ny tany, ry Jeneraly. Ankehitriny mihoatra noho ny taloha, Intxaurrondo ato am-ponay. Mandria am-piadanana
Tao amin'io sehatra sosialy io ihany, ilay mpiaramiasa aminy ao amin'ny Parlemanta Eropeàna, Jorge Buxadé, no nirary “mba hamiratra eo aminy ny fahazavana mandrakizay”
Fotoana iray hafa omen'ny filazambaovao ho antsika ny fahafatesan'ilay Jeneraly Rodríguez Galindo mba hanakanana, hanamelohana ary hamantarana ny kaontin'ireo izay miaina sy mampiroborobo ny fankahalàna an'i Espana sy ny lalàny.
Enga anie izy handry am-piadanana. Ary mba hamiratra eo aminy ny fahazavana mandrakizay
Ny 14 Febroary, nolazain ‘i Pili Zabal, anabavin'ny iray tamin'ireo niharam-boina noho ny nataon'i Rodríguez Galindo, tao amin'ny fahitalavitra fa niezaka izy ny hifandray tamin'i Rodríguez Galindo hanerena azy handray andraikitra noho ny fangirifiriana nomeny ny fianakaviany. Nila azy hiaiky ny tsy nety nataony izy, kanefa tsy nahare valiny avy aminy mihitsy. Ankehitriny, mitaky ny maha tompon'andraikitra azy tanteraka i Zabala : Galindo “lehilahy miaramila izy, nanaraka baiko ihany ary mazava amiko izao fa nahazo baiko avy amin'ireo lehibeny izy, izay mpanao politika.” Manantena i Zabala fa hipetraka eo amin'ny sezan'ny voampanga ny Praiminisitra teo aloha Felipe González amin'ny farany.
Ny taona 2000, i Juan María Jauregi, Governora ny faritra ao Donostia-San Sebastián, no nanome porofo ny fitsarana momba ny mahameloka an'i Rodríguez Galindo tamin'ny nahafatesan'i Lasa sy Zabala. Roapolo taona taty aoriana, rehefa niraradraraka tao amin'ny Twitter ny fiderana an'ilay jeneraly, taorian'ny nanambaràna ny fahafatesany, nizara izao manaraka izao i Maria Jauregi, zanaka vavin'i Jauregi, :
Tonga ao an-tsaiko ireto teny nataon'ny raiko ireto, izay tsy hohadinoiko velively: “Tsy fantatro izay hamono ahy, na ETA na i Galindo izy tenany”
Ny niafaràny dia ny ETA no nanao izany, ary ny taona 2000 no nitrangan'izany. Ny vady navelany, Maixabel Lasa, ary ny zanak'izy ireo vavy, Maria, no lasa feo roa matanjaka indrindra manohitra ny fankahalàna ary mikatsaka ny fahamarinana sy ny fanonerana ho an'ireo rehetra niharan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona tao amin'ilay Firenena Basque.
Ankehitriny, tsara ny mampahatsiahy ireto tenin'i Pablo de Greiff  ireto, ilay mpampiakateny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Fahamarinana, ny Lalàna sy ny Famerenana amin'ny laoniny, taorian'ny asa nanirahana azy tany Espaina ny taona 2014 :
“Tsy ny fahaizany manao maso be tsy mahita an'ireo raharaha sasantsasany no andrefesana ny tanjaky ny andrimpanjakana iray, indrindra indrindra mikasika ny zo fototra maha olona, fa kosa amin'ny fahaizan'izy ireny mandrindra izany amin'ny fomba tena mahomby, na dia sarotra sy hafahafa manao ahoana aza izany”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/23/151562/
 higadra 75 taona: https://www.elmundo.es/cronica/2014/10/12/54390f0aca47415f608b4575.html
 ny dimy: https://www.larazon.es/espana/libertad-condicional-para-el-ex-general-galind-DM3853566/
 namihina azy ireo ho fanaovam-beloma: https://elpais.com/diario/2003/02/26/portada/1046214044_850215.html